Wasiir Beyle: ”Dhaqaalaha kabka Miisaaniyada waxaa loo hakiyay doorshooyinka” – Radio Daljir
Wasiir Beyle: ”Dhaqaalaha kabka Miisaaniyada waxaa loo hakiyay doorshooyinka”
Juunyo 30, 2021 9:56 b 0
Wasiirka Maaliyadda Dowlada Federalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta loo joojiyay dhaqaalaha kabka ah ee la siiyo Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle Wasiirka Lacagta Soomaaliya oo la hadlayay saxaafada ayaa xusay in sababta ugu weyn ee loo hakiyay dhaqalaha ay beesha caalamka siin jirtey Soomaaliya ay tahay gelitaanka doorashada dalka.
“Shuruucda u dhigan dhinacyada bixiya kaalmada kabka ah waxaa ka mid ah in laga eego xasiloonida si in aan loo adeegsan doorashooyinka iyo rabshadaha.” ayuu yiri Wasiir Beyle oo la hadlayay warbaahinta dowlada.
Hase yeeshee Wasiir Beyle ayaa sheegay in dhaqaalaha la jaray dib loo soo celin doono kadib marka la doorto Madaxweyne isla markaana qiimeyn lagu sameeyo sida uu howsha u wadi karo.
Wasiirka Maaliyadda dowlada federalka ayaa hore u sheegay in dowladu ay la soo deristey dhaqaalo darro ayna meeshii ugu hooseysay gaartay.
Ciidamada (PSF) oo howlgalo ku diley rag ka tirsan Daacish
Caawa & Daljir iyo Cabdirisaaq Faamoos, Daljir Bosaaso (dhegayso)